पोर्टफोलियो विविधिकरण कसरी गर्ने ? के–के छन् फाइदा ?
काठमाडौं : एउटै उत्पादनमूलक कम्पनीले फरकफरक वस्तुहरुको उप्पादन गर्नु, स्टोरहरुले विभिन्न वस्तुहरु बिक्रीमा राख्नु, यसको कारण के होला ? उत्तर सामान्य छ, आफ्नो फाइदाको रक्षा गर्न । यदि एउटा वस्तुले माग पाएन अथवा राम्रो प्रदर्शन गरेन भनेपनि अन्य वस्तुको राम्रो माग र प्रदर्शनले प्रसस्त नाफा बुक गर्न सक्दछ । यो एक व्यापार रणनीति हो जसलाई विविधिकरण भनिन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य हो जोखिम कम गरी प्रतिफल बढाउनु । यो रणनीति पुँजी बजारका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोमा पनि प्रयोग गर्न सक्दछन् । तर कसरी ?
पहिला जोखिम बुझौं :
आधारभुत तहमा बुझ्दा, जोखिमले कुनै विशेष लगानी वा पोर्टफोलियोले भोग्नसक्ने आर्थिक नोक्सानको सम्भावनालाई जनाउँछ । तर यस परिभाषा बाहिर पनि जोखिमलाई धेरै कोटिहरुमा विभाजन गर्न सकिन्छ :
कम्पनी जोखिम : तपाईंले सेयरको माध्यमबाट लगानी गर्न खोज्नु भएको कम्पनी वा सरकारी इकाईका आर्थिक बलहरु के–के हुन् । यसको टाँट पल्टिनसक्ने सम्भावन न्यून, मध्यम वा उच्च, के छ ?
अस्थिरताको जोखिम : तपाईंले लगानी गर्न खाज्नु भएको कुनै विशेष कम्पनीले नोक्सान व्यहोरेका वर्षहरु कति छन् ? उदाहरणका लागि ठूला कम्पनीका सेयरहरुले औसतमा प्रत्येक ३ वर्षमा एक पटक नोक्सान व्यहोरेका हुन सक्छन् ।
तरलताको जोखिम : तपाईंलाई आपत्कालीन खर्चका लागि पैसा चाहिँदा आफ्नो लगानीलाई तत्काल नगदमा परिणत गर्न कतिको सहज हुनेछ ?
ब्याजदरको जोखिम : ब्याजदरमा भएको वृद्धि वा गिरावटले तपाईंको लगानीलाई कसरी असर गर्दछ ? उदाहरणका लागि, ब्याजदर बढ्दा बोन्डको मूल्यमा गिरावट आउने गर्दछ ।
मुद्रास्फीतिको जोखिम : के तपाईंको पोर्टफोलियोले दिने प्रतिफल मुद्रास्फीतिका कारण असर पर्ने जोखिममा छ ? ट्रेजरी बिल्स, छोटो समयका सरकारी बोन्डलगायत लगानी उपकरणमा आधारित पोर्टफोलियोहरुलाई मुद्रास्फीतिले असर पुर्याउनसक्छ ।
तर, लगानीकर्ताले बिर्सन नहुने कुरा भनेको हरेक लगानीमा कुनै न कुनै किसिमको जोखिम अवश्यै हुन्छ । यद्दपि, जोखिम कुनैमा धेरै होला र कुनैमा थोरै । लगानीको प्रकृतिले पनि जोखिमको तह फरक पार्न सक्छ ।
विविधिकरणले तपाईंलाई कसरी लाभ दिन्छ ?
विविधिकरणमा जोखिम र अस्थिरता न्यूनीकरण गर्नका लागि लगानीको मिश्रण प्रयोग गरिन्छ । अधिकतम लाभ लिनका लागि पोर्टफोलियोलाई विविधिकरण गर्ने केही सामान्य तरिकाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
कम्पनी विविधिकरण : कुनै एउटा मात्र कम्पनी नभई विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्न आवश्यक छ । विभिन्न कम्पनीहरुमा सेयर लगानी विविधिकरण गर्दा कुनै एउटाको भाउ घट्यो वा टाँट पल्टियो भने पनि यसले हाम्रो समग्र पोर्टफोलियोमा ठूलो हानी हुन पाउँदैन ।
उद्योग विविधिकरण : विभिन्न उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयर स्वामित्व लिने । उदाहरणका लागि, बैंकिङ, उत्पादनमूल, हाइड्रोपावर, प्रविधि लगायत ।
आकार विविधिकरण : विभिन्न आकारका वा बजार पुँजीकरणका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने । उदाहरणका लागि, सानो, मध्यम र ठूलो बजार पुँजीकरण भएका कम्पनीहरु ।
वैश्विक विविधिकरण : स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुको सेयरको मिश्रण गरी लगानी गर्ने ।
सम्पति विविधिकरण : सेयर र बोन्डमा मात्र नभई रियल स्टेट, प्रइभेट इक्विटी, कमोडिटी र नगदमा पनि लगानी विविधिकरण गर्ने ।
तपाईंको पोर्टफोलियोमा जति धेरै विविधता हुन्छ, तपाईंले ठूलो नोक्सान व्यहोर्ने सम्भावना त्यति नै थोरै हुन्छ ।
विविधिकरणको नकारात्मक पक्ष :
दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, लगानी गर्दा ठूलो घाटाको सम्भावना पनि ठूलो जीतको सम्भावनासँग हातमा हात मिलाएर जाने गर्दछ । विविधिकरणका फाइदाहरु पनि प्रायः लागतमा आउँदाछन्, त्यो हो घट्दो प्रतिफल । चित्रण गर्नका लागि, सन् १९७० देखि २०१६ सम्मको तथ्याङ्क लिएर गरिएको हालैको एक अध्ययनलाई लिन सकिन्छ । जसले ३ वटा काल्पनिक पोर्टफोलियोको तुलना गरेको छ । जुन यस प्रकार छ ।
परम्परागत : ३०% सेयर, ५०% बोन्ड, २०% नगद
मध्यम : ६०% सेयर, ३०% बोन्ड, १०% नगद
आक्रामक : ८०% सेयर, १५% बोन्ड, ५% नगद
यदि तपाईंको एक मात्र उद्देश्य नोक्सनबाट जोगिने हो भने परम्परागत पोर्टफोलियो उचित देखिन्छ । परम्परागत पोर्टफोलियोको एक वर्षमा अधिकतम नोक्सन १४% मात्र देखिएको थियो । तर सोही अवधिमा मध्यम पोर्टफोलियोको नोक्सान ३२.३% र आक्रामक लगानीको नोक्सान ४४.४% रहेको थियो ।
यी ३ वटा पोर्टफोलियोको वार्षिक प्रतिफलको तुलना गर्ने हो भने परम्परागत पोर्टफोलियोबाट वार्षिक ८.१% मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको थियो । तर सोही अवधिमा मध्यमबाट ९.४% र आक्रामकबाट १०% प्रतिफल प्राप्त भएको थियो ।
प्रतिशतका आधारमा तर यी ३ पोर्टफोलियोको प्रतिफलमा ठूलो फरक देखिँदैन । तर ४० वर्षको लगानी अवधिमा भने यसले ठूलो फरक पारेको देखिन्छ । यदि हरेक पोर्टफोलियो १० हजार रुपैयाँको लगानीबाट सुरु गरिएको थियो भने त्यसको अन्तिम प्रतिफल यस्तो देखिन जान्छ ।
परम्परागत : ३८९,५१९ रुपैयाँ
मध्यम : ६७६,१२६
आक्रामक : ८९२,०२८ रुपैयाँ
लगानी पोर्टफोलियोमा कसरी विविधिकरण गर्ने ?
यदि तपाईं विविधतायुक्त पोर्टफोलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने केही टिप्सहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ।
१. जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता तय गर्ने : तपाईंको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता भनेको दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल पाउनका लागि अल्पकालमा कति पैसा गुमाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको जोखिम स्तर निर्धारण गर्ने विभिन्न कारक तत्व हुन सक्नछन् ।
समय अवधि : तपाईं आफ्नो लगानीबाट कति चाँडो हात झिक्नुहुन्छ ? अवकास पाउने समय ३०–४० वर्ष बाँकी रहेकाले धेरै जोखिम बहन गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । तर अवकास पाउन ५–१० वर्ष मात्र बाँकी भएकाले कम जाखिम मोल्ने सम्भावना हुन्छ ।
आम्दानीको आवश्यकता : यदि तपाईं रोजगार हुनुहुन्छ भने उच्च जोखिमसँगै उच्च प्रतिफल पनि दिने लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । तर तपाईं रिटायर्ड हुनुहुन्छ भने जोखिम कम भएका, तर निरन्तर प्रतिफल दिने लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
पोर्टफोलियोको आकार : पोर्टफोलियोको आकार बढ्दै जाँदा, तपाईंसँग अल्पकालीन नोक्सान व्यहोर्ने प्रसस्त हुने भएकाले जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ ।तपाईंले चयन गर्ने लगानी तपाईंको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्दछ । उच्च जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता लगानीकर्ताले पोर्टफोलियोको अधिकांश हिस्सा सेयरमा लगाउन सक्दछन् । तर, जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता न्यून भएका लगानीकर्ताले भने बोन्ड तथा नगद हिस्सा बढाउँदा उचित हुनजान्छ ।
२. म्युचुअल फन्डहरुको लाभ लिने : आफ्नो जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता तय गरिसकेपछि लगानी गर्नुपर्दछ । तर विविधिकरण युक्त पोर्टफोलियो बनाउन सुरुवाती चरणका लगानीकर्तालाई समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । विविधिकृत लगानीयुक्त पोर्टफोलियो बनाउनका लागि प्रसस्त अध्ययन गर्न र कम्पनी छनोट गर्न समय पनि पर्याप्त चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा म्युचुअल फन्डको लगानी फाइदाकारी हुनसक्छ ।
३. लगानीलाई सेयर र बोन्डहरु भन्दा अघि बढाउने : व्यावसायीक वित्तीय लगानीकर्ताले लगानी निर्धारण गर्दा प्रायः जसो सेयर र बोन्डको अनुपातलाई लिने गर्दछन् । तर यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने विषय के छ भने, सेयर र बोन्डमा लगानी गर्नु भनेको कम्पनीमा लगानी गर्नु हो । तर लगानी विविधिकरण गर्दा सम्पतिका अन्य साधनहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैले, सेयर र बोन्डमा मात्र नभई रियल स्टेट, प्रइभेट इक्विटी, कमोडिटी र नगद लगायत सम्पतिका अन्य माध्यममा पनि लगानी विविधिकरण गर्नुपर्दछ ।
४. लगानी गरिएको सम्पतिको नियमित मूल्यांकन गर्ने : तपाईंको पोर्टफोलियो सही तरिकाले विविधिकरण भएको छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ? विविधकरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । लगानीका लागि निर्धारण गरिएको समय अवधि घट्दै जाँदा पोर्टफोलियोमा पनि परिवर्तन आउँदै जान्छ । त्यसैले, लगानीकर्ताले आफ्नो उमेर, आर्थिक अवस्था, लगानी आवश्यकता अनुसार नियमित रुपमा आफ्नो पोर्टफोलियोको मूल्यांकन गदै जानुपर्छ ।
अन्तयमा, लगानी गर्नु भनेको जोखिम र प्रतिफलको खेलमा सहभागी बन्नु हो । धरै जोखिम लिँदा ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, विशेषगरी अल्पकालमा । अर्कोतर्फ अति न्यून जोखिम मोल्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफलमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, लगानी पोर्टफोलियोको विविधिकरण जोखिम र प्रतिफललाई सन्तुलनमा राख्ने उचित माध्यम हो । विविधतायुक्त पोर्टफोलियो बनाउन आफ्नो जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता, समय अवधि र लगानी उद्देश्यलाई विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्दछ ।